Hogaamiye Yoweri Museveni ayaa doonaya markii lixaad inuu xafiiska qabto 35 sano oo uu xafiiska joogay.
76 jirkaan ayaa wajahaya 10 musharax oo ay ugu weyntahay Bobi Wine. Kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku eedeeyay ciidamada amaanka inay adeegsadeen awood xad dhaaf ah sidii ay u kala diri lahaayeen isu soo baxyada mucaaradka intii lagu guda jiray ololaha doorashada.
Laakiin dowlada ayaa sheegtay inay tahay talaabooyin adag oo lagama maarmaan ah si loo hubiyo inay u hogaansameen talaabooyinka looga hortagayo cudurka looga coronavirus oo ay ka mid tahay mamnuucida dadka inay sameeyaan isu soo baxyada.
Ninka raba inuu xukumo 40 sano.
Hogaamiye Museveni wuxuu ka mid yahay madaxweynayaashii ugu waqtiga dheeraa ee soo mara qaaradda Afrika. Isaga iyo Dhaqdhaqaaqiisa Mucaaradka ee Qaranka waxay xukunka qabsadeen 1986-kii markii uu dhammaaday dagaal shan sano socday, tan iyo markaas wuxuu hoggaaminayay Uganda.
Taageerayaashiisa ayaa ku amaanaya inuu dalka u horseeday nabad iyo barwaaqo, gaar ahaanna siyaasadiisa caafimaadka.
Wuxuu gacan ka gaystay yareynta faafida cudurka HIV, iyo xasuuqii ugu dambeeyay ee ka dhacay iskuulada iyo meheradaha, mamnuucida dhaqdhaqaaqa gawaarida iyo soo rogida isticmaalka waji duubista bisha Meey – waxaa loo arkaa inay jawaab u tahay cudurka coronavirus ee ka jira dalkiisa.
Sida laga soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins, Uganda waxay diiwaangalisay in ka yar 40,000 oo infekshan ah iyo ku dhowaad 300 oo qof oo u dhintay cudurka
Laakiin iyadoo reer galbeedku mar ku ammaaneen inuu ka mid yahay jiilka cusub ee hoggaamiyaasha Afrika, haddana dadka dhaleeceeya waxay ku eedeeyeen inuu u leexday kaligii taliye kale oo albaabada u laabay waddanka.
Museveni looma qoondeeyo isbedel ku yimaada hoggaanka xisbiga, wuxuuna sanadkii 2017 saxiixay sharci xadidaya Hogaamiyaha looga baahan yahay 75 jir, taasoo u oggolaaneysa inuu mar kale u tartamo xilka madaxweynaha.
Waxa uu arkay dhawr ka mid ah kuwa u loolamaya xukunkiisa sanadihii la soo dhaafay, gaar ahaan hogaamiyaha mudada dheer ee mucaaradka Kizza Besigye, ayaa la qabtay dhowr jeer ugu dambeyntiina wuxuu go’aansaday inuusan mar labaad u tartamin xilka madaxweynenimo sanadka 2021-ka.
Inkasta oo Museveni uu haysto saldhig ballaadhan oo taageero ah, gaar ahaan dhulka miyiga ah, haddana wuxuu la kulmayaa mucaaradnimo sii kordheysa oo salka ku haysa sinnaan la’aanta sii kordheysa iyo xukunkiisa qallafsan ee uu dalka ka wado.
Mid ka mid ah 10-ka musharax ee u tartamaya xilka madaxweynaha sanadkan waa muusikiiste Robert Kyagulanyi Ssentamu, oo ku magac dheer Bobi Wine. Wuxuu ku wajahayaa booliska bartamaha Kampala 30-ka Diseembar, 2020.Hiwaayadda Bobi Wine
Mid ka mid ah 10-ka musharax ee u tartamaya xilka madaxweynaha sanadkan waa muusikiiste Robert Kyagulanyi Ssentamu, oo ku magac dheer Bobi Wine.
38 jirkaan oo loogu yeeray “gehetto president” ayaa noqday xiddig Bariga Afrika ah horaantii 2000 ka hor inta uusan u gudbin siyaasada oo uu ku guuleysto kursi baarlamaan 2017.
Bobi Wine waxaa loo arkaa inuu yahay caqabada ugu weyn ee hortaagan xukunka Museveni wuxuuna abaabulay dhalinyaro badan oo aan siyaasada horay ugu soo marin. Horay wuxuu si adag u dhaleeceeyay una eedeeyay madaxweynaha “Si dadka looga nixiyo.”
Kala duwanaanshaha jiilka
Qeyb ka mid ah caannimada Bobi Wine ayaa ku soo dhaceysa da’diisa. Isaga oo 38 jir ah, waxa uu kalabar u dhigmaa madaxweyne Museveni, oo ka mid ah madaxweynayaasha ugu da’da yar adduunka.
“Hogaamiyaha geetooyinka” wuxuu ku koray xaafad isku raran ah oo ku taal caasimada Kampala. Taariikhdiisa iyo dadaalkiisa ku aaddan horumarinta caddaaladda bulshada ee waddankiisa iyada oo loo marayo muusiggiisa iyo siyaasaddiisa waxaa aad u bogaadiyey da ‘yartaan, magaalooyinkan badan.
Laakiin Bobi Wine ayaa sidoo kale ka yaabiyay maamulka markii uu soo jiitay tiro badan oo ka mid ah taageerayaashiisa oo ku sugnaa miyiga – oo loo maleynayo inay saldhig u tahay taageerada madaxweyne Museveni.
Xiisadaha ayaa kacsan, waxaana ololahan hareeyay rabshado, iyadoo tobaneeyo qof lagu dilay boqolaalna la xiray.
Hadday tixraacayeen tallaabooyinka loo qaadayo musiibada ayaa looga dan lahaa dadaallada Covid-19 ee lagu doonayo in lagu kala kaxeeyo isku imaatinnada siyaasadeed. Laakiin Human Rights Watch ayaa sheeganeysa in ciidamada amaanka ay adeegsanayaan sharciyada Cudurdaarrada ku tumashada xuquuqda iyo ku tumashada mucaaradka iyo saxaafadda.
Bobi Wine qudhiisa ayaa la xiray bishii November ee la soo dhaafay isagoo lagu eedeeyay inuu jabiyay talaabooyinka la dagaalanka musuqmaasuqa ee Covid. Xarigiisa waxaa ka dhashay mudaaharaadyo horseeday mowjado xarig ah waxaana ku dhintay tobanaan qof, kuwaas oo intooda badan la sheegay in ay toogteen ciidamada amniga.
Bobi Wine ayaa tan iyo markii ay kordhisay ololaha iyadoo xirtay jaakad aan xabadu karin iyo koofiyad aan rasaastu karin.
Dhamaadkii sanadkii hore ayuu joojiyay ololihiisa ka dib markii tiro ka mid ah kooxdiisii ​​la dhaawacay iyadoo ciidamada amaanka ay kala eryeen mid ka mid ah isu soo baxyadiisa siyaasadeed. Markii dambe wuxuu CNN u sheegay inuu ka badbaaday isku dayyo dil oo dhowr ah.
Doorka Uganda ee gobolka – iyo wixii ka dambeeya
Dal ka badan 42 milyan oo qof, Uganda waxaa ku hareeraysan Kenya, Koonfurta Suudaan, Tansaaniya, Rwanda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo.
Uganda, oo ah mid kamid ah dadka ugu badan ee soogalootiga adduunka, waxay martigalisaa ilaa 1.4 milyan oo qof oo ka kala yimid wadamada deriska ah.
Qaarkood waxay daawanayaan qalalaasaha siyaasadeed ee dalka ka jira, waxayna ka walwalayaan waxa dhici kara codeynta kadib. Waligood si nabad ah ugama aysan wareejin xukunka Ugandana mana cada waxa dhici doona hadii laga adkaado Mr Museveni, iyo waxa ay sameyn doonaan militariga.
Hogaamiyaha ayaa ku dhawaaqay isku shaandheyn lagu sameynayo ciidamada qalabka sida bishii Nofeembar, isagoo keensaday taliyihii hore ee howlgalada Uganda Maj Gen Paul Lokech, kaasoo loo magacaabay kuxigeenka taliyaha booliska inuu isku dubarido ciidamada amaanka caasimada inta howlgalka uu socdo. inta lagu jiro xilliga doorashada.